Sawirada farshaxan-yahankan kama samaysan alwaax, laakiin waxay ka samaysan yihiin dhoobada | Abuurista khadka tooska ah
Christopher David White waa farshaxan, laakiin sidoo kale wuu kari karaa loogu yeero dhalanteed taasi waxay awood u leedahay inay jahwareerto aragtida daawadayaasha ee ku dhagan shaqadiisa dhoobada. Jaleecada hore, qofku si qumman ayuu maskaxdiisa u qaadi karaa si uu ugu qanciyo inuu hortaagan yahay sawirro alwaax xardhan, laakiin sidaas maahan.
Haddii aan u dhowaanno farshaxankiisa, halkii aan ka qaban lahayn qoryaha waxaan ogaan doonnaa inay yihiin ka samaysan dhoobada, waxa kaliya ee David White uu awood u yeeshay inuu aad ugu fiirsado farshaxankiisa iyo xirfaddiisa, inuu si fiican u doqomo daawadayaasha dhaafaya masaafada dhexe ee farshaxankiisa.
Wuxuu ku dhashay Bedford, Indiana, bariga farshaxan Mareykan ah isagoo ku nool Virginia, wuxuu inta badan gacmihiisa ku sameeyaa farshaxanno dhoobo ah. Mawduuca ugu weyn ee laga helay shaqadiisa iyo taasi waa xumaanta walxaha, Caddaantu waxay abuurtaa dhowr qaybood oo muujinaya sida alwaax u burburayo, iyo sidoo kale inay macno isku mid ah u adeegsato birta iyo walxaha kale ee ku jira burburka.
Ujeedadaadu waa inaad sahamiso xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo dabeecadda. Isbedelka joogtada ahi waa waano waxa u noqon lahaa dhalanteed waqti dheer soconaya. Waxay si sax ah u tahay abuuritaanka farshaxan-macquul ah halkaas oo uu ku baadhayo xiriirka ka dhexeeya dabeecadda, aadanaha iyo ifafaale la'aanta.
Shaqo ah Faahfaahinta sawirada taasina waxay ku tusaysaa cillad la’aanta walxaha iyo sida wakhtigu u qadayo iyadoon dib loo dhigin. Waxaad leedahay boggaaga in la ogaado inta ka hartay shuqulladiisa farshaxanimada iyo sida uu u leeyahay doorbid dabiici ah mugdiga iyo qoto dheer, maaddaama qaar ka mid ah farshaxannada aan ku wadaagi doonno sawirrada ay noqon karaan xoogaa dhexgal, gaar ahaan gacmahaas iyo tibaaxaha dhammaantood ka farxinaya isha.
Hadaad rabtid dhamaadka ogow cabirka qoryaha, farshaxankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Tilmaame-yahan ayaa kaa dhigi doona inaad rumeysid in farshaxankiisa laga sameeyay alwaax halkii laga isticmaali lahaa dhoobada
3 jiir gaar ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha